Umhlahlandlela Wenja Ye-Aussiedoodle Ephelele: Abazalanisi, Izithombe, Imidlwane Nosayizi Wabadala - Izinhlobo
Umhlahlandlela Wenja Ye-Aussiedoodle Ephelele: Abazalanisi, Izithombe, Imidlwane Nosayizi Wabadala
Abantu abaningi bazwile ngeLabradoodle, abanye banayo wezwa ngeGoldendoodle , futhi manje kukhona i-Aussiedoodle.
Lezi zinja ezi-hybrid ezihlakaniphile ziyisiphambano somklami omusha, kepha nokho zithandwa yibo bonke abahlangana nazo.
I-Aussiedoodle iyinja yomndeni enhle kakhulu, esebenza kahle nabo bonke abantu nezinhlobo ezahlukahlukene zezilwane ezifuywayo. Lezi zinja ezinothando ngendlela emangalisayo zizosheshe zibe inhliziyo nomphefumulo womndeni.
Yini okufanele uyazi ngale nja enothando nenothando? Funda umhlahlandlela wethu ophelele womzali wesilwane esingezansi ukuthola konke odinga ukukwazi ngale pooch encane.
I-Australian Shepherd Poodle Mix iyinhlanganisela ye-Australian Shepherd nePoodle.
Ithebula lamaqiniso e-Aussiedoodle
Usayizi 14-23 ″ ukuphakama
Isisindo 25 - 70lb kuya ngosayizi wabazali
Isikhathi sokuphila Iminyaka eyi-10 - 12
Ifanele i- Imindeni esebenzayo
Ukuhluka Kwemibala Mnyama, Tan, Mhlophe, Cream kanye ne-Apricot
Isimo Okhaliphile, onothando, oqotho, ojabulayo futhi odlalayo
Amanye Amagama I-Aussiepoo, i-Australian Shepherd Poodle Mix
Ukubuka konke kwe-Aussiedoodle Puppy
Ingabe Lezi Zinja Ziyilungele Imindeni?
Ukuba nomxube we-Australian Shepherd Poodle: Umhlahlandlela Wokunakekela
Ungayiqeqesha Kanjani Inja Eyelusayo
Ukubukeka Kokuzala: Ijazi, Umbala Nokuzilungisa
I-Aussiedoodle Ikhule Ngokugcwele
Izidingo Ezithile Zokuzilungisa
Lolu hlobo lungumklami ohlanganisiwe phakathi kuka-Australian Shepherd kanye nePoodle. Umzali wePoodle angaba yinoma yimuphi usayizi, kepha imvamisa ujwayelekile noma mncane, kuya ngokuthi yimuphi umzali wePoodle osetshenziswayo ungaba nosayizi abathathu:
Njengoba lolu hlobo luvundlile, abonwa yinoma imaphi amaKennel Club amakhulu, kepha zombili izinhlobo zomzali ziyaziwa njengoba ziyizinja ezihlanzekile.
Zombili izinhlobo zabazali bale nja zihlakaniphe ngendlela eyisimanga, ngakho-ke ziyizinto ezithile zobuhlakani. Lokhu kubangela ukuthi babe nesithukuthezi kalula, futhi lezi zinja kuzodinga ukukhuthazeka kwengqondo , futhi okuningi! Ngaphandle kwayo, zingalimaza.
Ama-aussiedoodles abonakale kuphela eminyakeni engamashumi amabili edlule, noma kunjalo, kepha ahlala akhula ngokuthandwa.
Yize imvelaphi yazo ingaziwa, kukholakala ukuthi zazizalwe okokuqala eMelika. Ngaphandle kwalokhu, kuningi okwaziwayo ngohlobo lwabazali babo i-Australia Shepherd nePoodle.
Umlando Womalusi wase-Australia
Inja Yabelusi Yase-Australia
Ngokuphikisana nenkolelo evamile, abelusi base-Australia baqala ukukhuliswa e-United States. Igama labo lavela eqinisweni lokuthi izinja zazingama-Australia efeni, eza eMelika ngawo-1950. Isikhathi esengeziwe, lezi zinja zaziwa ngendlela emangalisayo ngamakhono abo okwalusa , futhi manje sekuvame ukubonwa njengezinja ezifuywayo.
Ama-Poodle anomlando omude wokuzala. Okokuqala ukubonwa emngceleni weFrance neJalimane ngekhulu le-15 nele-16, amaPoodle asetshenziswa njengezinja zezibhamu, ezaziwa kakhulu ngamakhono abo okuzingela amadada .
Okuthandwa kakhulu yiRoyalty, lezi zinja ziye zabonwa njengezilwane ezifuywayo zabacebile eminyakeni engama-400 edlule.
Le midlwane isohlangothini olushibhile yomndeni wokuxuba oku-poodle , ngokuvamile kubiza phakathi kuka- $ 700 no- $ 1,200 USD ngomdlwane ngamunye.
Umfuyi angakhokhisa okungaphezulu kwalokhu uma omunye wabazali noma bobabili benekhwalithi yokubonisa.
Kuyaye kube ukuthi uMalusi wase-Australia ungumama kanti uPoodle ungubaba, ikakhulukazi uma uzalaniswa nenja encane noma ithoyizi. Kodwa-ke, lokhu akulona iqiniso kuphela, ikakhulukazi uma umzali wePoodle eyiPoodle ejwayelekile.
Lezi zinja zihlala zanda ekuthandeni ezinemibala ehlukene nosayizi ovelayo, kepha ukuba nombono wobulili, usayizi, umbala nejazi olifunayo kungakusheshisa ukusesha.
Qiniseka ukuthi thola umfuyi oziphethe kahle lapho ufuna umdlwane. Hlala uvakashela umdlwane wakho we-Aussiedoodle kaningi, hlangana nomama wabo, futhi uma ukwazi, hlangana nobaba ukuthola umbono wobumnene. Ungathembi umfuyi onomdlwane ohlukanisiwe.
Ukuze siqonde isimo se-Aussiedoodle, kubalulekile ukuthi sibheke kuqala ubuntu bezinhlobo zombili zomzali kuqala.
Abelusi abanothando, abathembekile nabahlakaniphile, base-Australia bayisisekelo semfuyo. Lezi zinja ziyaziwa phakathi kwabalandeli ngezabo umqondo wamahlaya , bengathandi lutho ngaphandle kokudlala nomnikazi wabo.
Bazalelwa ekwaluseni izinkomo futhi ngidinga ukwazi ukucabanga ngezilwane ezinyaweni, ngenzela inja eyodwa ehlakaniphe kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi, amaPoodle anomusa futhi ajabule. Ukuba yinja ekhethwayo yabacebile, lezi zinja azisebenzi ngokuzikhandla futhi zibucayi ngazo zonke izindlela.
Yize kungenzeki ukubikezela ngqo ukuthi yiziphi izici zobuntu abazozithatha, banethuba lokuthola okungcono kakhulu kubo bobabili abazali - banomusa, bayamnandi futhi banothando.
Ngakolunye uhlangothi, inhlanganisela ye- ubuhlakani bezinhlobo zomzali kanye nesimo esidinga kakhulu sePoodle, singenzela inja enenkani emangalisayo.
Uma ungakwazi ukunikela isikhathi esanele nokunaka inja yakho bangahle bathambekele ekuthukutheleni. Lokhu yinto okufanele uyicabangele uma ufuna ukuthenga umdlwane.
Lezi zinja ezelusayo akwaziwa ukuthi zikhonkotha kakhulu. Kodwa-ke, lapho behamba, amagxolo abo avame ukukhala futhi azwakale ngezindonga. Ngakho-ke, uma uhlala efulethini elincane ledolobha noma efeni lezindlu, ungafisa ukubheka ukuthi inja yakho entsha izobathinta kanjani omakhelwane bakho.
Lezi zinja zakha ngendlela emangalisayo izibopho ezisondelene namalungu emindeni yabo futhi ingasabela kabi uma ishiywa yodwa isikhathi eside kakhulu.
Basebenzelana kahle nezinye izilwane ezifuywayo nabantu abangaziwa, kepha, kubalulekile ukukhumbula ukuthi lezi zinja zingaba abelusi bemvelo futhi zingazama ukuhambisa izilwane ezifuywayo, amalungu omndeni nezivakashi mayelana nekhaya.
Le ngxube uyinja enhle yomndeni ; ukuzwana kahle nabo bonke abancane nabadala.
Aziyifanele impilo yasedolobheni. Bazodinga izindawo ezinkulu ezivulekile zokwelula imilenze nokufinyelela njalo endaweni eyanele, ebiyelwe kahle yangaphandle. Ngenxa yalokho, ngeke zilungele noma ngubani ohlala edolobheni.
Ngenxa yezidingo zabo zamandla aphezulu, azilungele noma ngubani ongakwazi ukuhambisana nohambo lwabo olunzulu lwansuku zonke.
I-Aussiedoodle izodla phakathi kwezinkomishi ezi-2 nezingu-3 zokudla okomile nsuku zonke. UMkhandlu Kazwelonke Wocwaningo uncoma ukuthi wondla cishe ama-calories angu-1,350 we-Australian Shepherd enesisindo esingamakhilogremu angama-50, futhi kuzodingeka ukudla okufanayo nge-Aussiedoodle.
Ukudla okomile kufanele kube ikhwalithi enhle, okuphakelayo kwamahhala okusanhlamvu, okuqukethe ukuxubana kwamaprotheni, inyama nemifino. Gwema konke okususelwa kukolweni, ngoba lokhu kungadala ukusabela okweqile enjeni yakho.
Qiniseka ukuthi ubheka uhlu lwezithako ekudleni. Zama uku gwema noma yini ngamafutha noma ngamafutha kuzithako zokuqala ezintathu njengoba lokhu kuvame ukuba ngukudla okungenampilo okumangalisayo okuqukethe imfucumfucu eminingi esetshenzisiwe.
Ukudla okuluhlaza kungaba indlela enhle yokondla inja yakho ukudla okulinganiselayo okuqukethe ukuhlukahluka okuningi.
Ukudla okusemathinini kungenye indlela, nebhonasi engeziwe yokuthi umswakama ophakeme uzosiza inja yakho izizwe igcwele ngokushesha okukhulu, okwenza lokhu kudla kube ukukhetha okuhle kulabo abangakhuluphala kancane.
Ukudla kwenja okunamathiselwe (okusemathinini) kuvame ukuba nokuqukethwe okuphezulu kwamaprotheni kunalokho kudla kohlobo olomile, kusiza inja yakho ukuthi inyuse ukudla okunconywayo kwamaprotheni nsuku zonke okuyi-18-24%.
Izidingo zokungenisa zizohluka kakhulu phakathi kwezinja njengoba kususelwa kusayizi wazo, amazinga womsebenzi kanye ne-metabolism. Kubalulekile ukuthi uthathe isikhathi sokubheka ukuthi ukudla kwezinja zakho kukuthinta kanjani ukuziphatha kwazo.
Lezi zinja ezi-hybrid zidinga okungenani imizuzu engama-90 yokuzivocavoca nsuku zonke, zehlukaniswe zaba izizinda eziningi.
Izinja ze-aussiedoodle zihlakaniphe kakhulu futhi ngenxa yalokho zingakwazi zikhula zibhubhise kakhulu lapho zibhoreka . Enye indlela yokulwa nalokhu ukuqinisekisa ukuthi inja yakho ilolonga umzimba, ngoba lokhu kuzosiza ekuvuseleleni le nja, ngokomzimba nangokwengqondo.
Ngenxa yokuthi abelusi base-Australia babekhona ukufuya izinja , lapho eqeqeshwa, uzokhumbula kahle kakhulu.
Futhi bangabhukudi abahle kakhulu ngakho-ke bayabathatha endaweni ephephile lapho abangabhukuda khona kungaba wusuku lokuzijabulisa kuwo wonke umndeni.
Uzodinga ukuqeqeshwa okuyisisekelo kokulalela zisuka nje . Baziwa ngokuzama ukucekela phansi abanikazi babo, ngakho-ke imvelo yabo yokudlala izodinga ukugcinwa ihlolwe zisuka nje.
Ukuziqeqesha kungaba yinto ejabulisayo nejabulisayo. Lezi zinja zaziwa ngothando lwazo ukujabulisa futhi ngenxa yalokho ziyojabula kakhulu ngokufunda.
Eqinisweni, abelusi base-Australia bangabafundi abashesha kangako ukuthi “okugxile emsebenzini” kukhulunywa ngakho ezingeni labo lokuzala, ngakho-ke lokhu kuzoba yinto evamile kumbudlwana wakho wase-Aussiedoodle.
Le nja ine- indlela yokusebenza eqinile futhi uthanda ukuba matasa.
Ngaphezu koqeqesho lwabo oluyisisekelo lokulalela, zama ukufundisa amaqhinga ukuphonsela inselelo ubuhlakani benja yakho.
Zonke izinja, noma ngabe ziyizinhlobo ezihlanzekile noma ezixubekile, zithinteka ezindabeni zezempilo.
Inkinga enkulu i-Aussiedoodles ebhekene nayo yi-hip dysplasia .
Lesi simo sidala isifo samathambo nobuhlungu bamalunga. Ezimweni eziningi, lokhu kungalawulwa ngokudla nangokuzivocavoca umzimba, futhi uma kudingeka, imithi. Izinja ezinesisindo esinempilo futhi ezisetshenziswa ngokulingene zisengozini ephansi kakhulu yokuthuthukisa lesi simo. Ubufakazi bukhombisa nokuthi ukuhambisa inja yakho ngaphambi kokuba ifinyelele ekuvuthweni okugcwele kwandisa amathuba abo okuba nesifo se-hip dysplasia kanye nezinkinga ezihambisana nakho.
Ama-Poodle athanda ukutholwa ngamehlo, okuyisimo lapho iso liba namafu khona. Lokhu kwenzeka ngezigaba ezimbili, eziphansi futhi ezinzima. Uma ibanjwe kusenesikhathi, ingalashwa ngamaconsi wamehlo, noma kunjalo, uma ibanjwa emuva kwesikhathi kungaba nzima ukuyelapha.
Ngenxa yokuthi lokhu kungofuzo, lokhu kungahlolwa kubazali ngaphambi kokuzala. Noma yimuphi umfuyi omuhle uzokwazi ukuhlinzeka ngamasheke ezempilo aqinisekisa ukuthi umzali wabo uPoodle akaziphathi izakhi zofuzo zamehlo.
Uma usebenzisa ukutakulwa kwe-Aussiedoodle, kungenzeka kungenzeki ukufinyelela lolu lwazi.
Ezinye izingozi zezempilo ezingandile njalo zibandakanya ukuqunjelwa kanye ne-von Willebrand Disease .
Njengoba lolu hlobo luhlukanisiwe, lokhu kwenza kube nzima kakhulu ukubikezela usayizi walo ngqo, umbala nejazi.
Ngokwesilinganiso, ama-Mixed Poodle Mixes ase-Australia anesisindo esiphakathi kwamakhilogremu angama-25 kuye kwangama-70 futhi ame phakathi kwamasentimitha ayi-14 kuye kwangama-25 ubude. Lokhu kuya ngokuthi umzali wabo wayeyiPoodle ejwayelekile noma encane yini.
Akunandaba nabazali, bavame ukuba yizinja ezinde nezincane, ezinokwakha kwemisipha kancane. Ubuso babo buthambile kodwa bephapheme, futhi ngenxa yabazali babo base-Australia Shepherd bangaze babe namehlo aluhlaza okwesibhakabhaka.
Ijazi lazo lingahluka lisuke lithambe kakhulu futhi libushelelezi njenge-Australian Shepherd noma egobile futhi enezintambo ezinjengePoodle. Ngezikhathi ezithile lezi amajazi azoba yi-hypoallergenic , kepha isikhathi esiningi le nja izokhipha.
Imvamisa zibonakala ngemibala yendabuko ye-Australia Shepherd, njengokufaka i-tricoloring okubandakanya omnyama, obomvu, omnyama no-tan, noma umbala oqinile, ofana nokubomvu nokuhlaza okwesibhakabhaka.
Bangaba nemibala efana neyomzali wabo wePoodle, njengomnyama, mhlophe, i-tan, ibhilikosi nabanye abaningi.
Ama-aussiedoodle's akuzona izinja zokunakekelwa okuphansi, badinga ukuxubha njalo .
Ukuxubha nsuku zonke kuhle, ikakhulukazi uma kunengubo esontekile - njengePoodle. Uma lokhu kungenakwenzeka, okungenani zonke izinsuku. Kungadinga nokuthi zisikwe ngokomsebenzi njalo emavikini ayisishiyagalombili kuya kwayi-12.
Okunye ukuzilungisa okuyisisekelo kuzodingeka, njengokunqunywa kwezipikili njalo emavikini amane kuya kwayisithupha, kanye nokuxubha amazinyo njalo.
Le hybrid iyinja enhle yomndeni; ukuzwana kahle nabo bonke abancane nabadala.
Inja yase-Aussiedoodle iyinhlanganisela phakathi kwe-Australian Shepherd nePoodle.
Uma ungumuntu osebenza kakhulu noma umndeni owufunayo umlingani osebenza kakhulu we-canine le kungaba yinja yakho.
Khumbula, noma ngabe ungakanani umsebenzi wakho, lezi zinja azenzi kahle ezindlini ezihlangene zedolobha, njengoba ukufinyelela ngaphandle kubalulekile ngaso sonke isikhathi.
Lezi zinja zenzelwe umsebenzi futhi zidinga ukuzijabulisa njalo.
Ingabe ungumnikazi walezi zinja ezinhle? Ngabe ucabanga ukuthola i-Aussiedoodle? Zizwe ukhululekile ukusazisa imicabango yakho ngalomntwana omuhle kumazwana.
Imibala yeLabrador Retriever ethakazelisa kunazo zonke
Ukuzala Kwenja yeCatahoula Leopard: Isimo, Intengo Nosayizi
i-retriever yegolide exutshwe ne-cocker spaniel
i-golden retriever german Shepard mix
zingaki izinhlobo ezahlukahlukene zama-pit bull ezikhona
imidlwane yokuxuba i-golden retriever labrador
i-rottweiler exutshwe ne-pitbull